Malaha ma garanaysaan hogaamiyihiina? | Maalmahanews
Malaha ma garanaysaan hogaamiyihiina?
18.july 1960 ayaa uu ku dagay dayax gacmeedkii apollo ee ku lahaa dayaxa guudkiisa, muddo 4 bilood kadib ahna waxa somaliya ka qarxay afgambi military. tanni waa fariin tusaale u noqnaysa halka sartu ka qudhuntay. 1991 markii la eryaday maxamed siyaad barre ee dalka laga saaray halkay ka ahayd in aayaha dalka soomaliya laga wada tashado ayaa waxa si ula kac ah u kufsaday rag uu cali mahdi u horeeyay oo dawlad aan lagala tashan garabadii hubaysnaa dhisay.
tani waxay keentay in waxyaalo badan oo maanta aan arkaynaa unkamaan. maalintaas somaliland waxaa soo martay fursadda ay hadda haystaan. waxaase ay ku fashilmeen inay qasbaan amaba ay isku dayaan dadyawga reer somaliladn in 1991 dawladii la doortay iyo tii 1993kii la doortay yeeshaan kala duwanaanshiyo dhanka xukunka iyo awood qaybsiga ah.
Qaladkaasna waaka hadda keenay inay wali jiraan kala irdhaw aan xal rasmi ah lag agaadhin. ta kale ilaa waagaas waxa ay xukuumaddihii iskaga danbeeyay somaliland ku fashilanyihiin inay ogaadaan xulafadda siyaasiga ah ee ay ka garabsankaraan afrika, aasiya iyo amerika oo wax weyn ka tari lahaa baahidda aqoonsi ee ila hadda ina haysata. si kasta oo ay tahay waxaan wali dareensanahay inay jiraan fursaddo siyaasi ah oo saamixi kara in arrintaasi la gaadho.
Si taasi loo gaadho waxa lagama maarmaan ah in la helo hogaan dal yaqaan ah, dad yaqaan ah, diin yaqaan ah oo hogaamiye dhab ah ah.
tani ku imanmayso ilaa la doorto hogaamiye leh khibradaas oo kasoo shaqeeyay inbadan isla dawladda wax inagaga xidhanyihiin ee somaliya, lasoo caano dhamay maraykan oo fahmina kara siyaasadda u badan militariga ee ruushku ku dhaqmo. hogaanka caynkaas ahi waa mid ka iman kara dad iyo deegaano aan gaajo xukuni hayn se ay hayso gaajo hogaamineed inay soo bandhigaan.
waxaan ku rajo qabaa in hogaamiyahaasi hadda ka dhex ifaayo inta talada somaliland u tartmaysa ee leh seddexda musharax. si kasta oo ay tahay aniga oon ahayn deegaan ahaan deeganka hogaamiyaha aan danta u arko haddana waxaan dareensahay hopgaamiyahaasi inuu keeni karo isbadal muuqda oo dhawritaan badani ku jiro. hogaamiyaaysha dunida isbadala keenaa waa qaar raba taariikho hore oo ay laaheeyen inay saxaan iyo qaar raba inay keenaan aragti hogaamineed oo cusub oo dalkani kaga tago. hogamiyayaasha hadda tartamayaa si kasta oo ay somaliland u tahay reero isku tagay haddan waxaan dareensahay baahida xileed ee jirtaa inay kenayso in la doorto hogaamiye ay ka daacad tahay jiritaanka qarankani.
2014kii mar aan joogay dalka ruushka waxaan booqday safaaradda ruushka somliya ku leedahay oo markaan halkaasi madaxda joogta aan iswaraysanay waxa iisoo baxay farqi banaan oo badani inuu jiro, waliba waxaa isoo baxay inuu jiro rajo laga qabo in midawga soomliay dib usoo noqdo. haatan waxa dalka somaliay isla sannadkan 2016ka laga qabanayaa doorashadii madaxweyne, waxaan lagu rajo weynyahay in xasan shiikh maxamuud dib usoo noqdo isaga oo kaashanaya qaab doorasheedka uusoo dajiyay ee dunida badankeeduna ku raacday, lacag dhan 90milyan oo dunidu ugu baaqday siiba 50milyan uu sucuudigu usiiyay abaalmarintii uu xidhiidhka ugu jaray iiraan oo keensatay in sucuudigu rajo kasii qabo sii joogitaankiisa.
Tan uun maaha ee dhamaanba reer galbeedka ayaa aragti ahaan hadda backing by u samaynaya xasan. sidaasi oo ay tahay waxa meesha ka baxay rolekii ay laahyeen duwalka kiiniya iyo ethopia, tani oo keensanaysa inu xasan hadda leeyahay I CAN STAND ALONE!! sidaasi aawadeed, waxyaalahaas isa soo taraya oo dhami waxay keensanayaan haddaan somaliland hellin hogaan adag oo jira kadib 2017ka in somaliya si fudud inoogu qasbi karto in xuduudaha oo dhan inaga soo xidho oo caalamka isolation inaga galiso. tani waxa ifafaalooyin cadcad usii ah sida ay hadda inoogu soo dartay doorashadda ka dhacaysa somaliya in somaliland state kamid ah somaliya tahay oo 1500 oo representative laga soo qaadan doono si ay u codeeyaan iyo inay ka baxday wadahaladii ay somaliland la waday.
Intan oo dhami haddab somalialnd guddaheeda uuma baahna hogaamiye go’aan qaadasho liita leh, ku dhac lahayn oo aad u jilicsan se wax alagama maarmaan ah inaga oo iska dhigayna dhinac aragtiyaha reeraysan inaan u hiilino hogaamiyaha sifooyinkaas leh. waayo waxana xasustaa mar aan akhriyay act of disarmament kii ay galeen ruushka iyo maraykana waxa ugu weyn ee usuuro galiyay maraykanka inuu ku gulaysto heshiiskaasi waxa uu ahaa: isaga oo madaxweynihii watigaasi ee J.F.kennedy uu go’aan ku gaadhay haddii ruusku ka qaadi waayo gantaalaha cuba inuu isna turkey dhigayo oo duniduba isla guban doonto.
Waxaan sidan uga jeedaa somaliland waxay hadda taagantahay walaahi marxaladdii hogaamiye caynkaas ah aan heli lahayn. Dantayda maaha hogaamiayah reerkaygu ee walaahi waxa wax ii ah hogaamiyaha qarankan yar sii jiritaankiis aiyo midniamdiisa aan ku aamini karayo inta inta haldoorka ah een ka mid ahay u kacayaan. dalkan adaa leh ee muwaadin u hiili. somalidu waxay tiraah hadalka saridiisa waxa ka qurxoon saafidiisa ee hogaamiyaha aan danta u arkaa waa :
HOGAAMIYAHA HADALKA CAD, REER KOONFUREEDKU NECEBYIHIIN EE MUUSE BIIHI CABDI. YEELKEED WAXA LAGA YAABAA INAAD STUMP REERNIMO ISISAAN SE MA AHI NIN GOBOLADAAS KASOO JEEDA EE DAWLADNIMADA AAN CAALAMKA KUSOO ARKAY IYO WAXAAN U BAAHANAHAY BAA I GUBAYSA.
ZAKARIYE CABDILAAHI DHABRLOO.
PHD CANDIDTATE FOR: PEACE AND SECURITY